Salaadiinta Somaliland Oo Baaq Nabadeed u diray Issimadda Beelaha Dhulbahante | FooreNews
Home wararka Salaadiinta Somaliland Oo Baaq Nabadeed u diray Issimadda Beelaha Dhulbahante
Salaadiinta Somaliland Oo Baaq Nabadeed u diray Issimadda Beelaha Dhulbahante
fooreMar 05, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Toban Suldaan oo ka mid ah salaadiinta Somaliland ayaa maanta mar kale ugu baaqay Garaadadda beelaha dhul-bahante inay ka shaqeeyaan sidii nabad lagu gaadhi lahaa. Salaadiintaasi waxay sidaasi ku sheegeen shir jaraa’id oo ay maanta ku qabteen magaaladda Hargeysa.
Suldaan Rashiid Suldaan Cali Ducaale oo ka hadlay shirkaasi jaraa’id wuxuu yidhi “Anagoo ah salaadiinta Somaliland inta Hargeysa joogta waxaanu leenahay wixii dhacay way dhaceenne, waxaanu ku baaqaynaa Nabad wixii nabadda lagu waayo xumaan laguma helo. Waxaanu geed dheer iyo mid gaabanba waxaanu u fuulaynaa nabadda.Waxaanu leenahay Beeshayadda Dhulbahante waxaanu ugu baaqaynaa nabad, xukuumadayadana waxaanu ugu baaqaynaa nabad.”
Suldaan Aadan Faarax oo ka hadlay shirkaasi jaraa’id wuxuu yidhi “Waxaanu ugu baaqaynaa walaalahayaga Buuhoodle iyo Sool baaq nabadeed.dagaalkii ka dhacay deegaamadda Buuhoodle waxa sababay shirkii khaatumo seeg wixii ka soo baxay. Waxaanu tacsi u diraynaa eheladii dadkii ku dhintay dagaalkaasi ha noqdaan ciidammadda qaranka, beesha Buuhoodle iyo jabhadihii halkii ka dagaalamayay. waxaan leeyahay walaalayaal maanta Somaliland waxay maraysaa marxalad wanaagsan.”
“Waxaanu ugu baaqaynaa Garaadada dhigayaga ah ee gobolkaas Buuhoodle joogaa iyo meel kasta oo ay joogaanba garaadadda beesha Dhulbahante, waxaad moodaa inay Somaliland 21 sanadood rimanayd oo ay imika dambarkii u rayo. Waxaanu u soo jeedinaynaa dadka waaweyn inaanay khaatumo xumo ka tagin, dhalinyaraduna aanay Somaliland colaad ku seegin. Waxaanu jecel nahay inay Somaliland oo dhami galbeed illaa bari inay wax wada qabsadaan,”ayuu yidhi Suldaan Aadan Faarax.
“Waxaan u sheegayaa waxgaradka beelaha Buuhoodle iyo Sool in ay nabadgelyadooda ilaashadaan oo aanay ku duulin Cali Khaliif Galaydh wuxuu ka mid ahaa raggii Somaliland inay go’do saxeexay 1991-kii, caruurtiisiina meel fog ayuu soo dhigtay. Ma doonayno inuu dhalinyaradayada isku jabiyo oo uu isku diro. Reer Buuhoodle waxay ahaayeen kuwii taariikhda ku suntanaa ee halganka u galay markii Somaliland laga kicinayay Ingriiska ee Cali Garaad Jaamac hormuudka u ahaa,”ayuu yidhi Suldaan Aadan Faarax.
Suldaan Aadan Faarax wuxuu sheegay inay gogol nabadeed fidinayaan isla markaana ay diyaar u yihiin inay Buuhoodle tagayaan hawlo nabadeed.
Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal oo ka hadlay shirkaasi jaraa’id ayaa sheegay inay xukuumadda Somaliland iyo Salaadiinta dalkuba diyaar u yihiin inay nabad-gelyadda ka shaqeeyaan, waxaanu garaadada iyo isimadda beelaha Dhulbahante u soo jeediyay inay la yimaadaan dhaqan nabadeed oo ay xal lagaga gaadho tabashooyinkooda.
Suldaan Axmed Nuur, Suldaan Barre Xaaji Xuseen, Suldaan Ismaaciil Suldaan, Cabdiraxmaan, Suldaan Naasir Suldaan Cabdi, Suldaan Axmed-daahi iyo Suldaan Axmed Nuur Samaale.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo oo Dibu-habayn ku Samaynaya Xukuumaddiisa, Madaxtooyadda oo Xalay Mashquulsanayd iyo Wasiiro Farta wadnaha ku haya Next PostC/Casiis Samaalle oo Gaashaanka ku dhuftay in G/Wakiiladdu isu bedelay Xisbiga KULMIYE